गोयल भन्छन् : सबै रिटेल पसल र वर्कसपहरुमा बामरोल लुब्रिकेन्ट उपलब्ध हुनेछ | Automotive News Nepal
गोयल भन्छन् : सबै रिटेल पसल र वर्कसपहरुमा बामरोल लुब्रिकेन्ट उपलब्ध हुनेछ १० असार, २०७७
बामरोल कस्तो खालको लुब्रिकेन्ट हो ?
बामरोल लुब्रिकेन्ट भारतको बामर लरी एन्ड कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको लुब्रिकेन्ट हो । यो भारत सरकारकै कम्पनी हो । हाल भारतमा आएको ८३ वर्ष भयो । कम्पनीको स्थापना भएकै १ सय ५३ वर्ष भयो । यसले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी कार्य गरेको छ ।
लुब्रिकेन्ट र ग्रिजका साथै ट्राभल एन्ड भ्याकेसन, इन्डष्ट्रियल प्याकेजिङ, लजिस्टिक सर्भिस आदि विभिन्न क्षेत्रमा यो कम्पनीका उत्पादन उपलब्ध छन् । कम्पनीले ८१ वर्ष पहिले सन् १९३७ मा भारतको कोलकातास्थित प्लान्टबाट लुब्रिकेन्ट र ग्रिज उत्पादन थालेको थियो । हाल चेन्नाई, कोलकाता र सिल्वासामा यसको प्लान्ट छन् । बामरोललाई लुब्रिकेन्टको क्षेत्रमा सबैभन्दा विश्वसनीय र अनुभवी औद्योगिक तथा मोटर लुब्रिकेन्ट मानिन्छ । उत्कृष्ट प्रविधि, उच्च गुणस्तर र दक्ष प्रदर्शनको पर्याय बामरोल भारतको सर्बाधिक ग्रिज उत्पादक कम्पनी तथा एसियाकै शीर्ष १० सर्बाधिक ग्रिज उत्पादक कम्पनीको रुपमा परिचित छ ।
पहिले एचपी ब्रान्ड बिक्री गरिरहनु भएको थियो । अब नयाँ ब्रान्ड बिक्री–वितरण गर्न कति चुनौतीपूर्ण लागेको छ ?
चुनौती त हुन्छ । तर भारतमा निकै नै लोकप्रिय भएकाले नेपालमा पनि यसले लोकप्रियता पाउछ भन्ने छ । यसको ग्रिज नेपाली बजारमा पहिले देखि नै प्रचलित छ । फेरि हामी लामो समय देखि लुब्रिकेन्ट व्यवसायमै लागेको र डिलर नेटवर्क राम्रो भएकाले हामीलाई त्यस्तो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
स्किममा बजार निर्भर भएको पनि पाइन्छ । यो अवस्थामा नयाँ केही ल्याउनु भएको छ ?
स्किमले मात्र केही गर्दैन । सस्तो र गुणस्तरीय दुवै हुनुपर्छ । यसले गर्दा हामीले स्किमलाई धेरै ध्यान दिएका छैनौ ।
डिलर नेटवर्कको अवस्था के छ ?
गाडीको पहुँच भएको सबै स्थानमा हामीले उत्पादन उपलब्ध गराउने गरी कार्य गरिरहेका छौ । देशका सबै स्थानमा यो लुब्रिकेन्ट पुग्छ भन्ने लागेको छ । यसका लागि आवश्यक नेटवर्क तयार गर्ने योजना छ । सबै रिटेल पसल र मेकानिक्स वर्कसपहरुमा बामरोल लुब्रिकेन्ट उपलब्ध हुनेछ ।
कस्ता रेन्जका लुब्रिकेन्ट उपलब्ध गराउनु हुन्छ ?
अन्य कम्पनी जस्तै हाम्रोमा पनि रेन्जको कमी छैन । मोटरसाइकल देखि ठूला बस सम्म र इन्डष्ट्रियल क्षेत्रमा लाग्ने सबै रेन्जका लुब्रिकेन्ट उपलब्ध छन् ।
ग्राहकलाई के सुुझाव दिनुहुन्छ ?
एक पटक बामरोल लुब्रिकेन्ट प्रयोग गरेर हेर्नुस्, सहुलियत मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन पाउन सक्नु हुनेछ ।
नेपाली बजारमा करिव ९ महिना पहिले नेपाली बजारमा दिव्योल लुब्रिकेन्ट उपलब्ध छ । सत...